တာဝန်ရှိသည့်လောင်းကစားမူဝါဒ | Lottery.com
Last updated:6/ 29 / 2017
Lottery.com နားလည်နိုင် ပြဿနာ-လောင်းကစား / ဂိမ်း (နောင် "ပြဿနာဂိမ်း") ကျယ်ပြန့်ကာတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အဆက်မပြတ်ရှိပါတယ်, နှင့်အလောင်းအစားလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့အတွက်စိတ်ကျန်းမာရေးရောဂါအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပါတယ်။ , စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, လူမှုရေးသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်: ပြဿနာဂိမ်းကစားဘဝမဆိုအဓိကဧရိယာ၌ပြတ်တောက်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအပြုအမူကစားနေသည်။ ကဲ့သို့သော, ဒီမူဝါဒကကျနော်တို့တာဝန်ရှိဂိမ်းကစားမြှင့်တင်ရန်အတွက်သတင်းအချက်အလက်ပေးနိုငျရှိရာအောက်ပါဒေသများအမှာစကား:
အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အလွယ်တကူဖြစ်ဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့ app လုပ်ဆောင်ချက်ကိုအတွင်းထင်ရှားတဲ့နေရာချထားရှိ
ကျနော်တို့အလေးအနက်ထားသူတို့ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေး ယူ. အသက်မပြည့်သေးခြင်းနှင့်တာဝန်ရှိဂိမ်းများ၏ပြဿနာများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များနှင့်အသုံးပြုသူများကိုအာမခံ
ကျနော်တို့တာဝန်ရှိထီပါဝင်မှုမှကျူးလွန်နေကြသည်နှင့် Lottery.com မှတဆင့်ထီကစားရန်ရွေးချယ်သောငါတို့ကစားသမားတွေအားလုံးအတှကျတစ်ခုပျော်စရာနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်အတွေ့အကြုံကိုထံအပ်နှံကြသည်။ အများဆုံးဖောက်သည်ပျော်စရာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးအဘို့ကစားပါလိမ့်မယ်နေစဉ်, ငါတို့သည်လည်းကစားသမားငယ်လေးတစ်ရာခိုင်နှုန်းအကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန်:
တစ်ခုချင်းစီကိုနိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်ထားသည့်ဥပဒေရေးရာနှစ်အောက်ပုဂ္ဂိုလ်များ Lottery.com မှ upmost အရေးပါမှုသည်ထီကစားနှင့်လူငယ်များဂိမ်းတားဆီးရာမှပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အသက်အရွယ်နှင့် ပတ်သက်. မရိုးမသားသို့မဟုတ်တိသတင်းအချက်အလက်ပေးသူမဆိုအသက်မပြည့်သေးကစားသမားပြည်နယ်နှင့်ဖက်ဒရယ်ထီအေဂျင်စီများနှင့် / သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအလောင်းနှင့်မဆိုအနိုင်ရရှိတဲ့အားဖြင့်ဆုံးရှုံးအားလုံးအနိုင်ရရှိတဲ့အနေနဲ့သည့်အရေးမဆိုထားသောဆုအဖြစ်ကုသပါလိမ့်မည်ရပါလိမ့်မယ်။
သစ်တစ်ခု Lottery.com အကောင့်တက်သည်လက်မှတ်ထိုးသောလူတစ်ဦးတကာသူတို့ကစားရန်ဥပဒေရေးရာအသက်ဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရပါမည်။ ဒါဟာနောက်ထပ် Lottery.com ဥပဒေရေးရာကစားနှစ်အောက်ကစားသမားများကိုလက်ခံမထားဘူးကြောင်းဖောက်သည်အသိပေး
ကစားသမားအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးသည့်အခါ Lottery.com ကစားသမားသူတို့ရဲ့ပြည်နယ်အတွက်ကစားအနည်းဆုံးဥပဒေအသက်အရွယ်ကြောင်းအတည်ပြုမှဖေါ်ထုတ်စုဆောင်း
Lottery.com စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ကြော်ငြာရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အတူအသက်မပြည့်သေးကစားသမားပစ်မှတ်ထားမထားဘူး။ Lottery.com ဒါလုပ်နေတာကောင်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟုတ်သလိုကုမ္ပဏီ၏တန်ဖိုးများနှင့်ကိုက်ညီမပင်ဖြစ်သည်ခံစားရ
သင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်, အဘယ်အရာကိုလုပ်ပါနိုင်သလား
သင့်အကောင့်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်သေချာစေပါ။ အားလုံးသိကြ Lottery.com-နိုင်စွမ်း devices တွေကို password ကိုနှင့် / သို့မဟုတ် biometric ထိန်းချုပ်အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်အထိသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်, ဒီကောင်းတစ်ဦးအလေ့အကျင့်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သူက ပို. ပင်အရေးကြီးသောသင့်အိမ်ထောင်စုအတွက်အရွယ်မရောက်သေးသူရှိပါတယ်သည့်အခါပါပဲ။ ပုဂ္ဂလိကနှင့်သင်အခြားသူတစ်စုံတစ်ယောက်သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုမှတ်မိနေလိမ့်မည် software များကိုခွင့်မပြုပါဘူး, သင့် Lottery.com အကောင့်ထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားအံ့သောငှါမဆိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိပါကသင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးပါ။
သင် Lottery.com ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ဦးအသက်မပြည့်သေးသူတစ်ဦးကိုသတိပြုမိဖြစ်လာသောမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ရပ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးပါ။ ရိုးရိုး အီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ပျော်ရွှင်မှုအဖွဲ့ဖို့နဲ့ကျနော်တို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။ မျက်ခြေမပြတ်လျှင်, ငါတို့သည်ကစားသမားရဲ့အကောင့်အေးခဲနှင့်ကစားသမားအနေဖြင့်မှတ်ပုံတင်ကိုတောင်းဆိုပါလိမ့်မယ်။ Lottery.com ၏အသက်မပြည့်သေးအသုံးပြုမှုအားလုံးအစီရင်ခံစာများအလေးအနက်ထားကြပါတယ်။
Lottery.com ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်စစ်ဆင်ရေး၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစားတာဝန်ရှိစေကြီးမားတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ထမ်း, ဖောက်သည်များနှင့်ရပ်ရွာမှ pledges ။ ဒီအပေါင်ထားသောဥစ္စာကိုဝန်ထမ်းအကူအညီနှင့်လေ့ကျင့်ရေး, ကြော်ငြာနှင့်စျေးကွက်အလေ့အကျင့်များနှင့်တာဝန်ရှိနှင့်အသက်မပြည့်သေးဂိမ်းပတျဝနျးကငျြလူထုအသိအမြင်, ငါတို့၏ကတိကဝတ်များပါဝင်သည်။ Lottery.com ဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့ app အတွင်းအဓိက posted ထားတဲ့ပြဿနာဂိမ်းကစားခြင်းအပေါ်လမ်းညွှန်ချက်များ, မူဝါဒများနှင့်အလေ့အကျင့်တစ်ခုရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားပေးပါသည်။ Lottery.com လည်ပတ်ရှိရာပြည်နယ်များမှာတော့ Lottery.com အထွေထွေလူထုပညာပေးနှင့်ပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုကူညီပေးဖို့အစီအစဉ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများတစ်ခုထောက်ခံသူအဖြစ်ဆောင်ရွက်ကူညီအသိုင်းအဝိုင်း non-profit အဖွဲ့အစည်းကော်ပိုရိတ်ထောက်ခံမှုပေးရည်ရွယ်ပါသည်။
Lottery.com မဆိုတစ်ဦးချင်းစီအကောင့်အတွက်မဲနှိုက်နှုန်းလက်မှတ်တွေ 20 မှလက်မှတ်ဝယ်ယူ၏ကန့်သတ်ထားသည်။ နောက်ထပ်ကျနော်တို့လူတစ်ဦးနှုန်းသာတစ်ခုတည်းအကောင့်ကိုခွင့်ပြု, ကြှနျုပျတို့ကိုအခြားသူတစ်ဦးက Lottery.com ကစားသမားရဲ့အကောင့်များအသုံးပြုမှုတားမြစ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး Jailbreak လုပ်ထားတဲ့ဖုန်းပေါ်မှာ။
သင်ထီကစားသင့်အသက်တာတစ်အတားအဆီးထက်ဖျော်ဖြေမှုပုံစံဖြစ်အံ့သောငှါယုံကြည်လျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီချင်တယ်။ သင်ထီသို့မဟုတ်အခြားဂိမ်းကစားခြင်းငွေရေးကြေးရေးသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်, သင်သို့မဟုတ်သင့်မိသားစုအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုခံစားမိလြှငျ, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး လောင်းကစားသမားတွေအမည်မသိ သို့မဟုတ် 1-800-Gambler ခေါ်ဆိုပါ။ ပြဿနာဂိမ်းကစားခြင်း၏ရောဂါလက္ခဏာဖော်ထုတ်အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များမှာလောင်းကစားပြဿနာအပေါ်အမျိုးသားကောင်စီမှာတွေ့နိုင်ပါသည်: www.ncpgaming.org/i4a/survey/survey.cfm?id=6
သတင်းအချက်အလက်နှင့် Messaging ကို
တာဝန်သိသောလောင်းကစားများနှင့်ပြဿနာလောင်းကစားဝိုင်းအပေါ်ပြန်ကြားရေးမှာအားလုံး Lottery.com ဖောက်သည်အလွယ်တကူရရှိနိုင်http://www.rgrc.org/en. ထို့အပြင်ခုနှစ်, အားလုံး Lottery.com ဖောက်သည် 24-1-Gambler မှာပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေများအတွက် 800 နာရီ hotline ရယူနိုငျပါသညျ။ မည်သည့်ရည်ရွယ်အပြုသဘောသက်ရောက်မှု negate ဖို့မသကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်သောအကြီးမြတ်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိ, ရှိသမျှမူဝါဒနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်များသည်ဤစာတိုပေးပို့ရေးနှင့်အတူ align ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာတာဝန်ရှိဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်မက်ဆေ့ခ်ျပို့အဆိုပါဂိမ်းကစားခြင်းသို့မဟုတ်ထီလှုပ်ရှားမှုအလိုလိုကြော်ငြာနှင့်မြှင့်တင်ရေးတို့ကလွှမ်းမိုးမရရန်အရေးကြီးပါသည်။ ကြော်ငြာနှင့်မြှင့်တင်ရေး Lottery.com ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်များပြည့်စုံဖို့အရေးကြီးလှသည်နေစဉ်, ကျနော်တို့လူမှုရေးတာဝန်ယူမှု၏မြင့်မားတဲ့စံနှုန်းထိန်းသိမ်းဖို့သန္နိဋ္ဌာန်ဖြစ်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသောကြော်ငြာနှင့်စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများနှင့် / သို့မဟုတ်ပစ္စည်းများမ:
အင်တာနက်ကဂိမ်းနှင့်အချို့သောပြည်နယ်များအတွင်းရှိထီလက်မှတ်တွေ၏အွန်လိုင်းကစားအားဖွင့်ဖို့ Lottery.com ရဲ့ကတိကဝတ်များ၏တရားဝင်နှင့်အတူ, Lottery.com (ထီကစားအပါအဝင်) အသိပညာတိုးပွားလာခြင်းနှင့်ပြဿနာလေးစားမှုနဲ့အတူအသိအမြင်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး, ရောဂါဗေဒနှင့်အသက်မပြည့်သေးဂိမ်းကစားခြင်း၏ဝတ်လုံကိုလက်ခံခဲ့သည်။ အွန်လိုင်းဂိမ်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုသူတို့ဂိမ်းကစားခြင်းအလေ့အထကိုထိန်းချုပ်ဘို့ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ထီကစားသမားအရေးကြီးသော tools တွေကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းစဉ်းစားဟန်ဖြင့်ခံဝန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ Lottery.com အသက်မပြည့်သေးခြင်းနှင့်ပြဿနာဂိမ်းကစားခြင်းကိုတိုက်ဖျက်ရန်နှင့်တာဝန်ရှိဂိမ်းကစားမြှင့်တင်ရန်ပြဿနာတစ်ခုတက်ကြွသောချဉ်းကပ်နည်းယူသည်။